Konkordisma - Wikipedia
Ny konkordisma dia fivoasana ny bokim-pinoana izay anaovana fanadihadiana ny soratra masina ao aminy mba tsy hampifanohitra azy amin'ny fahalalana siantifikan’ny vanim-potoana iray. Amin'ny alalan’ny fivosana ara-bakiteny na amin’ny alalan'ny fanakaran-kevitra lalina kokoa ilay soratra masina no anatanterahana ny fanamarinana ara-tsiansa. Tsy voatery hisy fifandraisany anefa ny voalazan'ny soratra masin’ny fivavahana iray sy ireo petra-kevitra siantifika na dia mifanindran-dalana eny ihany aza. Ny Baiboly sy ny Kor'any no matetika anaovan'ny mpanao heviteny fivoasana araka ny konkordisma. Ny fivavahana bodista sy hindoa koa dia ahitana betsaka ny fivoasana ny boky masiny araka ny konkordisma.
1 Ny konkordisma eo amin'ny fivoasana ny Baiboly
1.1 Konkordisma eo amin'ny fivavahana katolika
1.1.1 Ny konkordisma tamin'ny taonjato faha-19
1.1.2 Ny konkordisma nanomboka tamin'ny taonjato faha-20
2 Ny konkordisma eo amin'ny fivoasana ny Kor'any
2.1 Ireo mpanandratra ny konkordisma silamo
2.2 Fitsikerana ny konkordisma silamo
3 Jereo koa :
Ny konkordisma eo amin'ny fivoasana ny BaibolyHanova
Niseho tao amin'ny tontolo kristiana tamin'ny taonjato faha-19 ny konkordisma mba ho entin'ny mpanao heviteny manamarina ny zavatra voasoratra ao amin'ny Baiboly. Ny protestantisma liberaly, izay miavaka noho ny fanaovany fanadihadiana ny Baiboly amin'ny fomba siantifika sahala amin'ny fitsikerana ny literatiora hafa rehetra, dia tsy iharan'izany fomba fiasa izany.
Konkordisma eo amin'ny fivavahana katolikaHanova
Ity dia tsy midika fa ny fivavahana katolika dia konkordista. Olona na fikambanana sasany no fantatra fa nanao an'io fomba fivoasana ny Baiboly io.
Ny konkordisma tamin'ny taonjato faha-19Hanova
Nisy asa soratra nampiasa ny konkordisma dia nivoaka tao amin'ny tontolo katolika. Ny pretra A. Arduin ohatra dia namoaka ny boky mitondra ny lohateny hoe La religion en face de la science: leçons sur l'accord entre les données de la révélation biblique et les théories scientifiques modernes tamin’ny taona 1883. Io boky io dia nanao izay hampifanaraka ny "andro" voalaza ao amin’ny Baiboly mba hifanandrify amin’ny vanim-potoana lehibe nivoaran’ny Tany. Mifamadika amin’izany anefa ny nataon’ny pretra Jean Guilbert, mpampianatra taranja zavaboary tao amin’ny Seminera Teolojikan'i Saint-Sulpice tao Issy-les-Moulinaux, izay namoaka ny boky voalohany fianarana ny zava-nisy talohan’ny Tantara, tamin'ny taona 1896, nosoratany ho an'ireo seminarista mba hianaran'izy ireo ny siansa amin'ny fomba tsy mitanila.
Nanomboka tamin’ny taona 1893 anefa ny Papa Leo XIII dia nanisy teny izany fomba fiasa izany. Ka tao amin'ny taratasiny ho an'ny eveka rehetra (Providentissimus Deus) dia nanambara ny tsy maha mety diso ny Baiboly nefa nandà ny fandraisana ara-bakiteny izany toetran'ny Baiboly izany. Nanambara izy fa tsy afaka hifanohitra ny siansa tena izy sy ny soratra ao amin'ny Baiboly raha hazavaina tsara. Izany ihany koa no hevitr'i Tomà avy any Akino. Famporisihana lehibe ho an'ny fandinihana ny Baiboly izany taratasin'ny Papa izany ka nahatonga ny mpanao fivoasana hampifanaraka izay voalazan'ny Baiboly amin'ny fahitana zava-baovao ataon'ireo manam-pahaizana siantifika tamin'ny fotoanandrony.
Namoaka ny Manuel d’apologétique i Emmanuel d’Alès, izany dia fitambarana boky efatra nosoratany tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19, araka ny fanomezana alalana sy famelana hatao pirinty ka hampiasain'ny Seminera'i Frantsa. Tsy dia tena asa soratra misy ady hevitra ny ao fa andrana konkordisma izay nampifanarahina tamin'ny fahalalana siantifikan'izany andro izany.
Ny konkordisma nanomboka tamin'ny taonjato faha-20Hanova
Tamin'ny namoahana ny taratasin’ny papa atao hoe Divino afflante Spiritu tamin’ny taona 1943 dia nanamafy ny fanambaràn'ny papa nodimbiasany ny Papa Pio XII ka nidera ireo fahitana zava-baovao tao amin'ny Commission biblique pontificale sy tao amin'ny Sekoly biblika sy arkeokojika frantsay ao Jerosalema sady nihevitra fa ny fomba fiasa ara-tantara sy ara-tsikera dia azo ekena rehefa vonton'ny finoana ny Fanahy Masina ny fon'ny mpampihatra izany fomba fiasa izany.
Tamin'ny taona 1993, izany hoe 50 sy 100 taona taty aorian'ny fivoahan'ireo taratasin’ny Papa ireo, ny tahirin-tsoratry ny Commission biblique pontificale, L’interprétation de la Bible dans l’Egise, dia nasehon'ny kardinaly Joseph Ratzinger tamin’ny Papa Joany Paoly II. Ireo fivoasana konkordista fondamantalista izay manome fahamarinana siantifika ny antsipiriany madinika ao amin'ny Baiboly dia lavina mazava tsara, sady nisy fijerena mahafaoka ireo fomba fiasa isan-karazany sy ny vokatra nentin'ireo fomba fiasa ireo koa tao amin'ireo taratasy ireo.
Ny konkordisma eo amin'ny fivoasana ny Kor'anyHanova
Ny konkordisma silamo dia fihetsiketsehana izay mikendry ny hanaporofo ara-tsiansa fa avy amin'Andriamanitra ny fivavahana silamo. Izany dia aharihariny amin'ny alalan'ny fisian-javatra heverina fa mifanaraka amin'ny fahalalana siantifika ao amin'ny Kor'any, izay tsy fantatra tamin'ny andro nanoratana ity boky masina ity. Izany dia manaporofo, noho ny fifanarahan'ny Kor'any amin'ny siansa, amin'ny maha boky nataon'Andriamanitra sora-tononina azy araka ny teolojia miozolmana, fa ny mpanoratra azy dia tsy ho iza fa olona nahazo tsindrimandry avy amin'Andriamanitra.
Ny konkordisma silamo dia fantatra koa amin'ny hoe Fahagagana siantifikan'ny Kor'any na Fahagagana siantifikan'ny Sonà na Fahamarinana siantifikan'ny Kor'any na Fahamarinana siatnifikan'ny Sonà. Marihina fa tsy ny Silamo rehetra akory no mpomba ny konkordisma.
Ireo mpanandratra ny konkordisma silamoHanova
Ny voalohany nandray anjara tamin'io konkordisma silamo io dia ny mpitsabo fratsay Maurice Bucaille izay namoaka boky tamin'ny taona 1976 mitondra ny lohateny hoe La Bible, le Coran et la Science ("Ny Baiboly sy ny Kor'any ary ny Siansa").
Nisy vokany lehibe teo amin'ireo olo-manana ny maha izy azy eo amin'ny tontolo arabo sy miozolmana ny asa sorany, indrindra ilay jeologa ejipsiana atao hoe Zaghloul El-Naggar sy ny mpiara-miasa aminy dia i Abdul Majeed Zindani izay Iemenita karismatika. Nanorina ny Commission sur les Signes Scientifiques dans le Coran et la Sunna ("Vaomiera momba ireo Famantarana Siantifika ao amin'ny Kor'any sy ny Sonà") i Zindani tao Arabia Saodita, ka tohanan'ny Fiombonambe Silamo Maneran-tany (Ligue Islamique Mondiale) sady vatsian’ny fitondram-panjakana vola izany. Lasa sekretera jeneralin'ilay vaomiera mandraka amin'ny taona 1995 i Zindani. Nanao valandresaka maro eran-tany, izay nanasany siantifika tsy silamo miasa amin'ny sehatra isan-karazany, ilay vaomiera.
Maro ireo resadresaka an-kaino aman-jery izay notanterahina nandritra ireo valandresaka ireo tamin'ny taona 1980, izay mbola azo jerena ao amin'ny Youtube sy amin'ny Dailymotion sy ny hafa koa. Azo jerena na vakina amin'ny tranon-kala mivoy an'io hevitra io izay manambara ny fitiavan'ny mpino silamo maro azy eo amin'ny tontolo silamo izany. Ny sarimihetsika (video) miely indrindra dia ny Ceci est la vérité ("Ity ny fahamarinana"), izay navoaka an-kasety maro sady ahitana an'i Zindani mampiresaka Siantifika tsy silamo.
Fitsikerana ny konkordisma silamoHanova
Eo amin'ny tontolo silamo miteny frantsay, ny tsikera mafy indrindra dia ny nataon'ilay asrofizisiana Nidhal Guessoum izay milaza fa manao "bricolages scintifiques" ("fanefitefena siantifika") ireo mpiaro ara-tsiasa ny finoana silamo, sady milaza fa ny fahalalana siantifikan'izy ireo dia ivelambelany fotsiny sy tsy ampy ary diso na lany andro, ary ny fanaovany hevi-teny ny andininy ao amin'ny Kor'any dia entina hanohanana firehana sady noterena fotsiny.
Ilay fizisiana vavy atao hoe Faouzia Charfi dia nanoratra boky tamin'ny taona 2013 atao hoe La Science voilée (“Ny Siansa vasarona”), izay anoherany ny konkordisma silamo mihanaka eo amin'ny tontolo akademika toniziana sady anaovany fanadihadiana ireo sampan'ny Siansa iharan'izany.
Tamin'ny taona 2002 ny Wall Street Journal dia namoaka lahatsora-panadihadiana momba ny fampiresahana an-kaino aman-jery ireo siantifika navoaka ho fantatry ny rehetra avy ao amin'ireo valandresaka iraisam-pirenena nampanaovin'ny Commission sur les Signes Scientifiques dans le Coran et la Sunna. Izany fanadihadiana izany dia mitondra ny lohateny hoe Western Scholars Play Key Role In Touting "Science" of the Quran ka mitsikera mafy dia mafy an'i Zindani sy ny tsy fanajana ny tsy fiandaniana siantifika ary ny fanomezana tombontsoa be mialoha ireo siantifika handray anjara amin'ny valandresaka.
Tsy fisian-diso ao amin'ny Baiboly
↑ Jean Guibert, Les origines : questions d'apologétique, éd. Letouzey et Ané, 1896, 359 p.
↑ Arnaud Hurel & Noël Coy, Dans l’épaisseur du temps : archéologues et géologues inventent la préhistoire, Publications scientifiques du Muséum, 2011, 442 p. (ISBN 978-2-85653-666-7)
↑ L'interprétation de la Bible dans l'Église [tahiry].
↑ « Le créationnisme musulman, espèce récente mais bien ancrée », Libération.fr,‎ 2015 (vakio an-tranonkala [tahiry])
↑ 6,0 et 6,1 Fanadihadiana nataon'ny Wall Street Journal tamin'ny 23 Janoary 2002, nataon'i Daniel Golden. Lohateny « Western scholar play a key role in touting the "Science" of the Quran » Jereo: https://www.wsj.com/articles/SB1011738146332966760 (tahiry); http://www.faithfreedom.org/Articles/DGolden/touting_science.htm (tahiry); http://www.anti-religion.net/scientifiques_coran.htm (tahiry)
↑ Abu-Ayyub Cédric-Ali, « Ceci est la vérité » [tahiry], 23 Jolay 2014.
↑ https://oumma.com/islam-et-science-moderne-les-questions-qui-fachent [tahiry]
↑ http://www.lepoint.fr/science/la-science-face-aux-islamistes-20-06-2013-1688946_25.php [tahiry]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkordisma&oldid=973489"
Dernière modification le 27 Aogositra 2019, à 06:34
Voaova farany tamin'ny 27 Aogositra 2019 amin'ny 06:34 ity pejy ity.